Ugqugquzela ubuntu uYvonne - Ilanga News
Home Izindaba Ugqugquzela ubuntu uYvonne
Ugqugquzela ubuntu uYvonne
UYVONNE Chaka Chaka (osesithombeni) usephumele obala wagqugquzela ubuntu kulesi sikhathi sobunzima esibhekene neNingizimu Afrika njengoba iqhubeka nokubhebhetheka i-coronavirus, ehlalise lubhojozi umhlaba wonke.
Lo mzwilili onegama nakwamanye amazwe futhi obuye abe yinxusa le-UNICEF, uthi lesi yisikhathi esikahle sokuba aba-ntu babeke ubuntu phambili. Ekhuluma nabezindaba ze-eNCA lo mculi, uveze ukuthi kubalulekile ukuba abantu baqale ukuzinuka amakhwapha.
“Yisikhathi sokuba sonke sibheke ukuthi singaba kanjani wusizo kulabo abaludinga kakhulu. Masikhombiseni ubuntu ngokuphosa esivivaneni ukusiza abahlwempu,” esho.
UYvonne uthathwa njengenkakha emculweni kuleli nasezwenikazi i-Afrika. Lo mculi oteketiswa ngelenkosazana yase-Afrika, unxuse labo abakwaziyo ukucaphuna kusale ukuba banikelele labo abangathathi ndawo ngezinto ezifana namanzi nezinsipho, okuyikhona okubalulekile nokungahlenga impilo yabo.
* Khonamanjalo, iyaqhubeka imikhankaso yosaziwayo abehlukene ezinkundleni zokuxhumana yokugqugquzela abantu ukuba bahlale ezindlini ngalesi sikhathi, bahloniphe imiyalelo kahulumeni njengoba leli lizwe lisengaphansi kwezinsuku eziwu-21 zokugonqa ezamenyezelwa nguMengameli Cyril Ramaphosa ukuzama ukunqanda ukubhe-bhetheka kwe-coronavirus.
Previous articlemakholwa nesiteshi senkolo esiyisipesheli ngephasika
Next articleKusolwa “umgwazo” kuhoxiswa icala